MDC | The Africa Report
Zimbabwe information minister steps down
Wednesday, 24 June 2015 Nqobile Bhebhe
Zimbabwe Information minister Jonathan Moyo has reportedly stepped down because of a constitutional complication caused by his recent election as a Member of Parliament.
Robert Mugabe, Zimbabwe's absentee president
Monday, 23 March 2015 Nqobile Bhebhe
Zimbabwe President Robert Mugabe on Monday flew to Algeria for a state visit amid a growing chorus for him to cut down on his now frequent foreign travels.
Tuesday, 01 July 2014 Blessing-Miles Tendi
Zimbabwe's MDC in crisis
Thursday, 26 June 2014 Frank Chikowore in Harare
Zimbabwe's Tsvangirai in trouble
Thursday, 12 June 2014 Frank Chikowore in Harare
The country's leading opposition party is fighting calls for its leader to step down.
Tuesday, 04 March 2014 Janet Shoko
Former Zimbabwe Prime Minister Morgan Tsvangirai's Movement for Democratic Change (MDC) party has been rebuked by its long-time allies –Australia and the United States – for political violence.
Zimbabwe: Violent MDC attacks blamed on Tsvangirai
Monday, 17 February 2014 Janet Shoko
Former Zimbabwean Prime Minister Morgan Tsvangirai's leadership of the opposition MDC is coming under increased scrutiny after two senior party leaders were at the weekend assaulted at the weekend for demanding he step down.
Zimbabwe's ruling party rejects economic dialogue with MDC
Wednesday, 05 February 2014 Janet Shoko
Zimbabwe President Robert Mugabe's ruling party has rejected calls for dialogue by the main opposition to resolve the country's worsening economic problems saying its rivals were rejected by the electorate.
Zimbabwe's past weighs on the economy
Wednesday, 08 January 2014 Frank chikowore in Harare
Harare is trying to negotiate relief on its foreign debt. Critics say the diamond industry, despite lifted sanctions, is not playing its part.
Zimbabwe's multiple farm owners under the spotlight amid food deficit forecast
Tuesday, 12 November 2013 Janet Shoko
Zimbabwe's much criticised land reform programme is considered a closed chapter, but President Robert Mugabe's Zanu PF seems to be tearing itself apart on how to proceed with an audit that may likely expose the rot in the manner the agrarian reform was carried out.
The battle for survival - Zimbabwe's "do or die" elections
Wednesday, 31 July 2013 Patrick Smith in Bindura and Frank Chikowore in Harare
In a head to head replay of 2008's contested elections between Mugabe and Tsvangirai, whoever loses will face division and anger that could tear his party apart.